Kushanya kwekurapa mu2021: ndezvipi zvaunosungirwa?
2021 kushanya kwekurapa: chii chakamiswa kana kwete
Kusundira mberi kune chekuita nemhando mbiri dzebvunzo;
ruzivo rwekutanga nekudzivirira kushanya (VIP) (kunze kwevamwe vanhu vari panjodzi: vana, vakadzi vane pamuviri, vashandi veusiku, nezvimwewo) nekuvandudzwa kwayo;
kuvandudzwa kweyedzo yeaptitude uye kushanya kwepakati kwevashandi vanobatsirwa nekusimbiswa kwekutarisa, kunze kwevashandi vakaratidzirwa kune ionizing radiation yakarongedzwa muchikamu A.
Yese bvunzo iyi, iyo nguva yekupedzisira inofanirwa kusvika naApril 16, 2021 (kana iyo yakatombomisikidzwa kekutanga uye isingakwanise kurongeka pamberi paZvita 4, 2020) inogona kumisikidzwa kweinopfuura gore rimwe mushure menguva yekupedzisira.
Nekudaro, kumisikidzwa kwavo hakuna kurongeka, ndiko chiremba anoshanda Ndiani ari kusarudza. Anogona kusarudza kuzvichengeta maererano neruzivo rwuripo kwaari maererano nemamiriro ehutano hwemushandi, pamwe nenjodzi dzine chekuita nenzvimbo yake yebasa kana mamiriro ake ekushanda.
2021 zvekushanya kwekurapwa: zvinorehwa nekumbomiswa
Hazvisi kwauri kuti urongere kumisikidza asi kumushonga wekubasa. Saka ndiye chiremba anoshanda anofanirwa:
kune rimwe divi, kukuzivisai nezvacho kunonoka zvakare
Kushanya kwekurapa mu2021: ndezvipi zvaunosungirwa? July 10th, 2021Tranquillus
VERENGA Adwords: tsvaga uye uvandudze
pashure2021 inodzivisa mutero: the default rate grids
zvinoteveraPowerPoint inofamba mifananidzo yekudzidzisa
General fizikisi yekutanga yakanaka mudzidzo yepamusoro
Veruzhinji Chikumbiro cheMaonero paVersion 3.2.a yeZvinodiwa Repository yeCloud Computing Vanopa (SecNumCloud)
Dzidza SEO: zvese zvakakosha kuti utange!
Kisimusi, Gore Idzva: wako waunoshandira anogona kukumanikidza kuti ushande here?